भिडियो-बधाई कसरी बनाउने: विचार र विशिष्ट सिफारिसहरू
विभिन्न उत्सव घटनाहरू मा उपहार बाहेक, यो भन्नु, एक जन्मदिन छ कि छैन भनेर, वा प्रणय दिवस, म कार्ड दिन निर्णय गरे। तथापि, पारंपरिक कागज वा कसैले अचम्म ई-मेल पोस्टकार्ड द्वारा आज कठिन पठाए। अर्कोतर्फ, यस्तो बधाई बिना पनि गर्न सक्दैन। तपाईं बस मूर्त कुरा छुटकारा छैन चाहनुहुन्छ किनभने, तर पनि शब्द वा दृश्य तस्बिरहरू प्रेम / मूल्यांकन / को प्रेम एक को इच्छा व्यक्त गर्न। banality बच्न साथ आउन, तर पर्वहरू को नायक आफ्नो भावना व्यक्त गर्न के हो? यो तथ्यलाई हाम्रो लेखमा मदत गर्न निमित्त एक भिडियो अभिवादन गर्न कसरी कुनै पनि महत्वपूर्ण घटना हो।
रचनात्मक भिडियो-सलाम लागि विचार
आज, सबैलाई कम्प्युटर र इन्टरनेट पहुँच छ, तर भिडियो अभिवादन को विचार कागज कार्ड एक मूल वैकल्पिक हुनेछ किनभने। तिनीहरूले सम्पादन र भिडियो सम्पादन को लागि धेरै कार्यक्रम को एक को मद्दतले बनाउन सक्छ। सबैभन्दा चिरपरिचित र एकदम कार्यात्मक, तपाईं चयन गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज चलचित्र निर्माता, रोचक सेवाहरूको एक किसिम र नेट मा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ जो को प्रभाव संग भिडियो सम्पादक - अक्सर पूर्वनिर्धारित स्थापित छ जो, साथै Movavi।
तपाईं कसरी स्लाइड शो वा पूर्ण-fledged संगीत भिडियो को रूप मा एक अभिवादन कार्ड सिर्जना गर्न थाहा छैन? तपाईं एउटा मूल विचार बधाई संग आउन आवश्यक छ। वार्षिकोत्सव, प्रणय दिवस, नयाँ वर्ष, विवाह, जन्म बच्चा र अरूको - तल विभिन्न घटनाहरू लागि उपयुक्त हो कि केही राम्रो मनोरंजक विकल्प छन्। तपाईं यसलाई रुचि छ, र सिर्जना गर्ने विचार चयन!
जीवनी वा पूर्वव्यापी
पहिलो विचार जन्मदिन अभिवादन वा जन्मदिन लागि सिद्ध छ। यसको सार तिनीहरूको भिडियो तपाईंलाई ठूलो दिन सम्म जन्म देखि एक जन्मदिन थियो जो, जीवन को बाटो, बारेमा बताउने तथ्यलाई तल फोडे। फोटो, पुरानो चलचित्र को टुकडे - - तपाईं सामाग्री को एक किसिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हिंड्न सिक्ने जस्तै, म त्यो शिविरमा गए कसरी स्कूल, गए; तस्वीर साथीहरू र सहयोगिहरु, परिवार र यति मा संग लिएको। तपाईं पनि केही रेखाचित्र र शिल्प, कहिलेकाँही जन्मदिन केटा सुरु प्राप्त गर्न सक्छन् आफ्नो सोख, उपलब्धिहरू र यति मा बारेमा भिडियोमा बताउनुहोस्। डी हामी तपाईंलाई विचार बुझ्न लाग्छ। यो सुरिलो रोलर यो सामाग्री सबै माउन्ट मात्र हुनेछ।
प्रेम र प्रेमको इतिहास
ग्रीटिंग भिडियो कसरी बनाउने भएको नवविवाहितहरूका लागि? यस मामला मा एक राम्रो विकल्प एक सुन्दर प्रेम कहानी गोली हुनेछ। जहाँ तिनीहरूले सँगै हुनुहुन्छ यो फोटो razdobytye संयुक्त जोडी, भिडियो, तपाईंलाई मदत गर्नेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई जवान को जानकारी बारेमा सोध्न, साथै रोचक कथाहरू / आफ्नो जीवन को क्षण, अगाडि जानुहोस् र साथीहरू र नातेदारहरु संग साक्षात्कार जस्तै केहि लाग्न सक्छ। भिडियो को अन्त मा आफैलाई र आफ्नो प्रियजनलाई सबै यस्तो महत्त्वपूर्ण घटना र रेकर्ड अनुरोध संग भविष्य परिवार बधाई राम्रो हुनेछ।
मनपर्ने गर्न बधाई
तपाईं आफ्नो दोस्रो आधा चकित गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रणय दिवस, त्यसपछि उनको लागि लेख्न प्रेम को एक सुन्दर घोषणा, आफ्नो मनपर्ने संगीत ट्रयाक भिडियोहरू सम्मिलित साथै साझेदारी फोटो। साथै, तपाईंले आफ्नो क्लिप भाग लिन साथी वा परिवार सोध्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई जो आफ्नो अभिवादन विकास हुनेछ, र क्यामेरा मा यो सबै हटाउन शब्दहरू वा अक्षर, संग संकेत गर्नुहोस्। भिडियो सम्पादक को एक मा क्लिप फिट र आफ्नो प्रेम एक पठाउनुहोस्। खैर, पाटी को विचार र एक जन्मदिन लागि उपयुक्त छ। यो सबै साथीहरूको अभिवादन भिडियो कसरी बनाउने एक राम्रो विकल्प हो। प्रभाव आश्चर्यजनक छ हेर्न,!
फिल्म / गीत को असामान्य षड्यन्त्र
त्यहाँ रोलर्स अभिवादन अन्य, धेरै रमाइलो र रचनात्मक विचार गर्दै छन्। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं कसलाई आफ्नो क्लिप समर्पित जाँदैछन् को मनपर्ने चलचित्र थाहा छ, यो तपाईंको बधाई लागि अंश प्रयोग गर्नुहोस्। र यो यदि अभिनेता को जन्मदिन केटा बोल्न रूपमा ozvuchte एक रोचक बिन्दु चयन, उहाँलाई केही चाहन्छु, र यति मा। एन ट्राइंफ दोषी नही गीत प्रेम? आफ्नो मुख्य लाइन बिताइरहेका, यो पूर्ववत। र त्यसपछि मात्र वा साथीहरूसँग चलाउन र आफ्नो भिडियो को लागि एक टिप्पणी बनाउन। खैर, तपाईं मात्र होइन गीत, तर पनि एक क्लिप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यान्वयन, को पाठ्यक्रम, तपाईं झूठ हुनेछ।
को जन्मदिन केटा बधाई वा विवाहित दम्पतीको सक्छन् र सेलिब्रिटी। आफ्नै तरिकामा आफ्नो मनपर्ने अभिनेता को एक स्वगत बस ozvuchte खण्डमा। वा समाचार विज्ञप्ति, को प्रस्तोता संसारमा महत्त्वपूर्ण विकासक्रम कुरा हुनेछ जसमा प्रयोग - जन्मदिन, विवाह, वार्षिकोत्सव, एक बच्चा को जन्म, र यति मा ..
हामी यी विचारहरू आफ्नो चाड घटना लागि उपयुक्त कुरा चयन गर्न पर्याप्त छन् जस्तो लाग्छ। र कसरी विशेष कार्यक्रम, भिडियो सम्पादक मध्ये बधाई एक भिडियो बनाउन बारेमा अब एक सानो। हामी विन्डोज चलचित्र निर्माता केन्द्रित हुनेछ।
भिडियो सम्पादक मा एक congratulatory क्लिप सिर्जना
पहिलो चरणको - प्रिपेरेटरी। यसलाई तपाईंले आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ विषयगत चित्र, फोटो, videootryvke र संगीत को एक चयन गर्न आवश्यक छ। यो फोल्डरहरू तिनीहरूलाई सबै पूर्व-क्रमबद्ध गर्न राम्रो छ, त्यसैले यसलाई स्थापना हेर्न सजिलो थियो।
चरण पुस्तिका द्वारा चरण:
भिडियो सम्पादक खुला र मल्टिमिडिया आयात प्रदान (समारोह माथिल्लो बायाँ कुनामा)। विशिष्ट फोल्डरमा प्रोग्राम मा, हामीलाई द्वारा चयन सबै फाइलहरू लोड गरिनेछ - संगीत दुवै चित्र र भिडियो।
"हेर्नुहोस्" मेनु: समय मोड जानुहोस्।
अब, सरल कदम बनाउन: पालो आवश्यक भिडियोहरू वा फोटो मा चयन र विन्डो को तल तिनीहरूलाई तान्नुहोस् - समय मा। यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ प्रत्येक फ्रेम5सेकेन्डको लागि प्रदर्शन छ। अवधि परिवर्तन गर्न, तपाईंले चाहेको फ्रेम मा क्लिक गर्नुहोस्, र देखिन्छ कि तीर प्रयोग, इच्छाएको लम्बाइ गर्न सीमा सार्न।
त्यसपछि तपाईं (मा प्रभाव थप्न सक्नुहुन्छ "Tools" मेनु)। इच्छित प्रभाव चयन (तपाईंलाई एउटा विशेष बक्समा तिनीहरूलाई हेर्न, प्ले मा क्लिक गर्नुहोस्) र इच्छित फ्रेम गर्न यो तान्नुहोस्।
को पट्टी "ध्वनि / संगीत" मा अडियो फाइलहरू तानेर संगीत घुसाउनुहोस्।
अब कथाबोर्ड गर्न ( "सङ्क्रमण" चयन गर्नुहोस् "उपकरण" मेनुमा) समय छ। के फ्रेम बीच संक्रमण हुन र समान प्रभाव तिनीहरूलाई तान्नुहोस् हुनेछ कार्यकर्ता गर्न आफूलाई छनौट, तर, र तिनीहरूलाई बीच अन्तरालहरू मा।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, सुरुमा र भिडियो को अन्त मा, आफ्नो भिडियो र शीर्षक को नाम थप्न। तिनीहरूले पनि हुन यो मेनु फेला गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, तपाईं आफ्नो काम को परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ, र यदि आवश्यक केही सम्पादन बनाउन। तपाईं यसलाई आनन्द भने, तपाईं मेनुबाट "प्रकाशित चलचित्र" चयन गरेर एउटा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ। यो WMV ढाँचामा सुरक्षित गरिनेछ।
तपाईं समाप्त congratulatory भिडियो पठाउन अघि, भिडियो साझेदारी मा, उदाहरणका लागि, "YouTube" (तपाईँले अन्य प्रयोगकर्ताहरूको लागि निजी बनाउन सक्छ) मा पोस्ट। परिणामस्वरूप लिंक र मित्र पठाउनुहोस्।
म यस लेखमा कसरी लोकप्रिय भिडियो सम्पादक को एक एक भिडियो अभिवादन गर्न सामना गर्न तपाईं मदत गरेको छ लाग्छ। मूल विज्ञापनहरु बनाउनको लागि एक प्रस्तावित विचार आफ्नै रचनात्मक विचार गयौं वा असामान्य अभिवादन को आफ्नो मनपर्ने संस्करण फेला पार्न मदत गरे।
Tor ब्राउजर के हो?
कसरी वचन रेखाचित्र कोर्न। सरल सुझाव
कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर। के: अर्को कार्यक्रम प्रयोगमा फाइल
स्क्यानिङ र पहिचान कार्यक्रम: समीक्षा उपकरण
परिवर्तित विभिन्न भिडियोमा भिडियो ढाँचाको फाइलहरू
Iatrogenesis - यो के हो? Iatrogenic प्रकार, कारण, रोकथाम
Kutyakov इवान Semenovich: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
Apsheronsk, क्रास्नोडार क्षेत्र: नया ठाउमा सार्नु गर्न समीक्षाएँ। शहर को विवरण, जीवित अवस्था, काम
Hellebore पानी जुम्रा। hellebore पानी निर्देश को प्रयोगमा
बेलारुसमा सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरू: अवलोकन, वर्णन र रोचक तथ्यहरू
यार्न pompoms, वा नयाँ विचार
किन toxicosis, र तपाईं गर्भावस्था को समयमा वाकवाकी लागि उपाय पाउन सक्नुहुन्छ कि?
लाभ प्रकार्य र यसको प्रकारहरू
"आयु" - मिसाइल सिस्टम: विशेषताहरु, परीक्षण। युक्रेनी 300-मिलिमिटर रकेट correctable लडाई "आयु"
अल्गोरिदम म्यापिङ मूल्य प्रवाहको
आयोग व्यापार। आयोग व्यापार nonfoods नियम